I-Nexus 7 2isizukulwane lata kuyinto tablet omuhle kakhulu futhi engabizi. Omkhulu Its 1,920 x 1,200 IControl Panel yangamuva IPS iphaneli ube ukujabula emangalisayo ezibukwayo. Nexus 7 ukwesekwa MPEG4, H.263, H.264 and DivX. Futhi ungakwazi futhi ukudlala MKV, Ukudla, AVI, njll. ngokufaka app video umdlali ezifana MX Player kusuka Google Play noma Amazon Apps.
Ngakho on the Nexus Google, zikhona 2 izindlela amabhayisikobho on Nexus yakho 7.
1. Ukuthengwa umxokozelo movie kusuka Google Play and Amazon, ngoba lezizinto eliphezulu Android kakade, I-Nexus 7 1 noma 2 sizukulwane ukudlala nabo ngqo, ngoba sebenzisa Hard kulungiswa ukudlala it. Le izindlela akadingi imithombo ingxenye enkulu iprosesa nebhethri. Kodwa iphuzu layo ababuthakathaka can'y adlale eminingi ifomethi.
2. Ukufaka umdlali video ezifana MX Player noma Dice Player asebenzisa internals ayo ukudlala ividiyo, ngokuthi "Isofthiwe kulungiswa". Isekela cishe bonke ifomethi, kuyilapho uncika okwengeziwe iprosesa main, esikhundleni emagama Hardware, futhi kudingeka amandla webhethri xaxa.
Izinto kulungiswa nick Kusobala ukhetho kangcono video ukudlalwa, ngoba akanawo imingcele elikhulu kangakanani ukuqopha, futhi hhayi kuyayiqeda ibhethri okuningi njengoba nje, kodwa ukuze ukwazi abakwazi ukusebenzisa wona, esinalo ukuguqula ividiyo zingene uhlobo okuyinto lo Nexus 7 asekelwa.
Izinyathelo on indlela yokulungisa nezindaba ukudlala futhi udlale amafayela MKV on Nexus yakho 7
Step 1: Download futhi ufake Isiqophi Converter Ultimate kwikhompyutha yakho
Isiqophi Converter Ultimate iyinhlangano video amathuluzi anamandla ukukusiza baguqula imiqophi and DVD, ngisho ukulanda YouTube & Tivo videoes nokusha ividiyo kuya DVD.
Step 2: Ukufaka amavidiyo ofuna hlelo
Run lolu hlelo, wafaka lakho resource video kuwo. Ungakwazi kalula bakwenze lokhu chofoza "Engeza Amafayela" noma "Umthwalo DVD". Futhi ungakwazi futhi ukungenisa amavidyo kanye DVD by ehudula amafayela abezindaba ngqo hlelo.
Step 3: Beka i-profile for Nexus yakho 7
Kufanele ukhethe iphrofayli ngaphambi kokuqala baguqula. Ngokuvamile ukhetha iphrofayli video format, like MP4, AVI, Ukudla, njll. Futhi lapha, ungakhetha i-profile ngqo ngokukhetha imodeli yedivayisi. Njengoba this Converter Ultimate ibilokhu eliphezulu idivayisi Edume, Smartphones kanye amaphilisi.
Step 4: Qala baguqula amafayela MKV kuya MP4
Ngemuva kwenziwe izilungiselelo okukhipha. Ungase chofoza inkinobho ezinkulu "guqula 'ukuqala inqubo ukuguqulwa.
Step 5: Xhuma idivayisi yakho ku-computer futhi ukudlulisela amabhayisikobho kuyona
Kanye ukuguqulwa kuphelile, xhuma Nexus 7 kuya computer bese ukopisha amavidiyo phezu kudivayisi yakho, ke ungakwazi watch movie yakho ngokusebenzisa i kwakhiwe-in video isidlali lokusebenza ngaphandle Stuttering / okokuqandisa / izingqinamba zokuvumelanisa.
Posted on December 29, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba Video / Audio SolutionAmathegi ukuguqula MKV ukuze Nexus 7, MKV ukuze Nexus 7 Converter, ukudlala MKV on Nexus 7, ukubukela MKV on Nexus 7
Langaphambilini post Previous: Idlalwa kanjani Blu-ray Movies on Xbox 360
Next post Next: Idlalwa kanjani WMV imiqophi on Mac OS X